Sida loo dib iPhone SMS aan Lugood =
Sida loo kaabta SMS iPhone aan Lugood
> Resource > Lugood > Sida loo kaabta iPhone SMS aan Lugood
Waxaan ka heli iPhone ah muddo sanado ah, sidaas darteed waxaan qoraal badan oo sii tan oo aan mailkooda iPhone. Walaashay doonayo inay isticmaalaan iPhone muddo dhowr bilood ah. Waxaan doonayaa in aan gurmad aan iPhone SMS si aan computer hadda. Waxaad og tihiin, walaashay tirtiri laga yaabaa in aan xiriiro, sawiro, videos, SMS ... iwm. ma cid ku gartaan si loo gurmad oo dhan, kuwaas oo ah alaabtii aan Lugood, sababtoo ah qof kasta oo kale ee aan qoyska kuwaas oo uu leeyahay computer ah ayaa wax mar hore syncd in Lugood. Fadlan caawi
Lugood runtii waa qalab fiican si ay u maareeyaan xogta iPhone, halka ay sidoo kale waxay leedahay cillado. Waxaad xogta aad eegista ma awoodo gurmad. Si aad SMS iPhone gurmad aan Lugood, waxaad isku dayi kartaa TunesGo Wondershare . Waa iPhone xirfadle si Mac qalab kala iibsiga. Waxay kuu ogolaanaysaa farriimaha qoraalka iPhone gurmad ka iPhone in PC aan Lugood. Just in 3 talaabooyin fudud, waxa aad ka dhigi doonaa. Sidee? Aan hubi faahfaahinta hoos ku qoran.
Download Wondershare file rakibo TunesGo, .exe. Ka dib markii ay soo degsado, double guji faylka .exe si ay u rakibi. Waa shuqullada si fiican Windows 7, Windows 8, Windows Vista, iyo Windows XP.
Tallaabada 2. Run Wondershare TunesGo
Ka dib markii la rakibey Waa dhammaatay, Oo Bilaabay TunesGo Wondershare iyo xiriiriyaan iPhone la PC la iPhone USB cable. Software Tani waxay aqoonsan doonaa iPhone si toos ah iyo muujiyaan iPhone si degdeg ah u furmo suuqa ugu weyn. Wondershare TunesGo (Windows) wuxuu taageeraa dhamaan noocyada iPhone oo ay maamulaan ee macruufka 5, macruufka 6 macruufka 7 macruufka 8 ama ka macruufka dambeeyay 9. Si aad u ogaatid wixii faahfaahin ah ee qalabka ay taageerayaan, guji halkan .
Tallaabada 3. kaabta iPhone SMS
In uu furmo suuqa hoose, guji SMS khaanadda bidix. Ka dib markii gujinaya SMS, aad arki doonaa in fariimaha qoraalka ah oo dhan ee aad iPhone waxaa lagu tusay in ay leeg- saxda ah. Laga soo bilaabo halkan, waxaad leedahay laba doorasho si SMS iPhone gurmad.
1. kaabta fariimaha qoraalka ah iPhone xulay
Si fariin qoraal ah gurmad la soo xulay, calaamadee sanduuqa jeegga hore ee mid kasta oo doonayay farriin qoraal ah. Guji "Dhoofinta in". In liiska hoos-hoos u, doortaan "Dhoofinta SMS loo doortay in ay computer". In sanduuqa wadahadal dabamariyay kor, meel u helo on your computer si loo badbaadiyo fariimaha qoraalka ah in aad kor u taageero ah.
2. kaabta oo dhan fariimaha qoraalka ah iPhone.
fariimaha qoraalka Si gurmad oo dhan iPhone, guji "Dhoofinta in" on sare ee daaqadda. In liiska hoos-hoos u, dooro "dhoofinta SMS oo dhan si ay u computer". Markaas habka taageerto ilaa fariimaha qoraalka ah iPhone bilaabmin.
Si loo hubiyo ammaanka fariin qoraal aad muhiim u sameeyo, waa in aad raad raac fariimahan iPhone text ka iPhone in computer waqti ka waqti. Iyadoo TunesGo Wondershare, si fudud oo si deg deg ah u aad samayn doonaa. Haddii aad dareentid in aad laga badiyay fariin qoraal iPhone aad ka hor taageerto kor, fadlan isku day Wondershare Dr.Fone inay soo kabsadaan fariimaha qoraalka ah iPhone .
Isku day TunesGo Wondershare si SMS iPhone gurmad si fudud!
Sidee si ay u gudbiyaan Music ka iPad in PC Windows
Sidee si ay u gudbiyaan iPhone Camera Roll si Mac
Sida loo iPhone kaabta in Computer leh oo aan Lugood
3 talooyin aad u baahan tahay in aad ogaato ka hor inta aadan tirtirto maktabadda Lugood aad
Dooro Sidaada la jecel yahay in celi iPhone: Iyadoo Lugood ama iCloud
Si fudud Bedelka Lugood playlist in iPad
Sida loo soo dejinta Lugood Library in Winamp
Sidee loo Diiwaan Online Music iyo Bedelka in Lugood